विद्यार्थी साथिहरुले भावि सभापति तपाई नै हो भनिरहनु भएको छ - निता कुलुङ राई - RatoKalam.com is No one news portal.
विद्यार्थी साथिहरुले भावि सभापति तपाई नै हो भनिरहनु भएको छ – निता कुलुङ राई
January 27, 2019 मा प्रकाशित
उपसभापति, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन
पथरी बहुमुखी क्याम्पस, पथरीशनिश्चरे—१, मोरङ
यतिवेला के गर्दै हुनुहुन्छ ?
क्याम्पस जाने । पढ्ने । साथिहरुसँग भेटघाट । विद्यार्थीहरुको समस्या बुझ्ने, समाधानमा सकेको पहल गर्ने । यस्तै भइरहेको छ । मेरो मुख्य प्राथमिकता अध्ययन नै हो ।
स्ववियु निर्वाचन तोकियो त्यही मितिमा हुन्छ कि हुन्न जस्तो लाग्छ ?
त्रिभुवन विश्व विद्यालयले फागुन १४ गते घोषणा गरिसकेको छ । त्यही मितिमा हुन्छ । हुनुपर्छ । रोकिनु पर्ने कुनै कारण छैन । पथरी बहुमुखी क्याम्पसमा तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्न सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठनहरु तयार छौ ।
पथरी बहुमुखी क्याम्पसमा स्ववियु के गर्दै छ ?
हामी पथरी बहुमुखी क्याम्पको स्ववियुमा संस्थापक भयौ । स्ववियुको कार्यालय व्यवस्थापन र सिष्टम मिलाउन लागियो ।
क्याम्पसमा बसेर पढ्न मिल्ने गरी लाइवेरी व्यवस्थापन गर्न क्याम्पसलाई सहयोग गरियो । पिउने पानी फिल्टरको लागि स्वलार जडान गर्नमा भूमिका खेलेका छौ । क्याम्पस रंगरोकन गर्न सहकार्य गरेका छौ । क्यान्टिन व्यवस्थित गर्ने काममा पनि स्ववियु वा हाम्रो भूमिका रहेको छ । प्रत्येक सुक्रबार खेलकुद कार्यक्रम हुन्छ । त्यो वातावरण स्ववियुले मिलाएको छ ।
भलिवल, फुटबल, ब्यडमिन्टन, टिटी, चेस खेलाडिहरुलाई लेख्ने व्यवस्था छ । म्याराथ दौड गरायौं । नयाँ विद्यार्थीहरुलाई स्वागत कार्यक्रम त बर्षेनी हुने नै भयो । क्याम्पसमा खेल मैदान सानो छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हामी लागिरहेका छौ । सवारी सधान पार्किङ अझ व्यवस्थित गर्न कोशिस गर्नु गरिरहेका छौ । छात्रावृति पहिला २ प्रतिशत थियो । हाम्रै पहलमा ७ प्रतिशत बनाएका छौ । निम्न वर्गीय विद्यार्थीलाई मासिक शूल्क छुट गराउने काम गरेका छौ ।
स्ववियु सभापतिको दावेदारी सुनिन्छ हो ?
पक्कै पनि । म सभापति को उमेद्वार घोषणा गरेको हुँ ।
तपाईको दावेदारी के का लागि ?
अघि पनि भने, हामी यो क्याम्पसको स्ववियुमा संस्थापक भयौ । धेरै कामहरु भर्खरै शूरु भएको छ । यी कामहरु पुरा गर्न सभापति हुनुपर्छ भन्ने हो । अनि कलेजका साथिहरुले मेरो नेतृत्वको अपेक्षा गर्नुभएको छ । अधिकांश विद्यार्थीहरुले तपाई सभापति उठ्नु पर्छ भनेर सल्लाह सुझाव दिइरहनु भएको छ । साथिहरुको चाहना पुरा गर्न पनि मैले एक पटक स्ववियु सभापति बन्ने आट गरेको हुँ ।
जित्नुभयो भने के के योजनाहरु छन् ?
पहिलो कुरा त क्याम्पसमा शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । विद्यार्थीहरुले आनन्दसँग अध्ययन गर्ने वातावरणको विकास गर्नेकुरामा पहल गर्नेछु । क्याम्पसलाई टिकाउन श्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । अहिले स्थानीय तहमा धेरै अधिकारहरु आएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबाट आर्थिक व्यवस्थापनको लागि क्याम्पससँग मिलेर लाग्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । यो क्षेत्र भने सुकुम्बासी तथा न्यून आय श्रोत भएका जनताका छोराछोरी पढ्ने क्याम्पस भएकाले शूल्क निरन्तर बढाउनु हुन्न भन्ने कुरामा लागिने छ । सकेसम्म शुल्क घटाउन पर्छ भन्नेमा लाग्नेछु ।
खेलकुद र खेलाडिहरुको विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु नियमित रुपमा गर्न सकिन्छ । कोचिङ कक्षा चलाउने कुरामा पहल गर्नेछु । खेलकुद मैदान अझ व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ ।
टिकट पाउने सम्भावना र आधारहरु के के हुन ?
म क्याम्पसको नियमित विद्यार्थी हुँ । स्ववियुको उपसभापति भएर अनुभव लिइसकेको छु । गर्न सक्ने एउटा सक्षम महिलाले टिकट नपाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । क्याम्पसका अधिकांश विद्यार्थीले भावि सभापति तपाई नै हो भनिरहनु भएको छ । यस्तो अवस्थामा
संगठनले मलाई नै टिकट दिन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क छु ।
अनि स्ववियुमा विवाद जस्तो देखिन्छ ? तपाईलाई कारबाहीको घोषणा पनि भयो । यो विषय के हो ?
कार्वाही त स्ववियु सभापतिसमेत रहनु भएका नेवि संघका नेता गोपालकुमार साम्बा(गिरिस)को अनआवश्यक प्रोपोगण्डा हो । म स्ववियुको जिम्मेवार निर्वाचित उपसभापति र अनेरास्ववियुको सदस्य हुँ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट स्ववियुको नाममा एक पैसा पनि रकम आएको छैन ।
पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाबाट छुटिएको रकम नगरमै छ । त्यो रकम छोइएको छैन । अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले म निता कुलुङ राईको संयोजकत्वमा बनाएको समितिले नगर स्तरीय महिला फुटबल गरेका भब्य रुपमा सम्पन्न गर्न सफल भयौ । भब्य रुपमा फुटबल कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि केही साथिहरुलाई जलन भएको हो । म भन्न चाहन्छु । कार्यक्रमको विषयलाई लिएर स्ववियु उपसभापतिलाई कारबाही होइन कि यस्तै यस्तै कार्यक्रम गर्न अनुरोध गर्दछु । त्यसमा मेरो पनि साथ सहयोग रहनेछ । इष्र्या होइन सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।
अहिले त्यो विषय के भइरहेको छ ?
मैलो त्यो विषयलाई धेरै महत्व दिएको छैन । कारबाहीको हल्ला स्ववियु नियमावली विपरित छ । नियमावली विपरित यसरी प्रोपोगण्डामा लाग्नु सभापति गोपाल साम्बा आफैलाई लाज हुनुपर्ने हो । विद्यार्थी र स्ववियुको मानसम्मान, हकहितको कुराप्रति म सचेत छु । के गर्नुहुन्छ । के गर्नुहुन्न भन्नेकुरा सिकाइराख्नु पर्दैन भन्ने लाग्छ । स्ववियु एउटा ब्यक्ति वा हल्लाको भरमा चल्ने संगठन होइन । यसको ओजलाई बुझ्नु पर्दछ ।
स्ववियुको चुनाव फागुन १४ गते हुदैछ । सभापतिमा उठ्दैछु । विद्यार्थी साथिहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु कि तपाईहरुको सल्लाह सुझाव अनुसार चल्नेछु । निर्वाचनमा साथ सहयोग गर्न कलेजका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई आर्दिक अनुरोध गर्दछु ।